Inaad ku doontid raallinimada Rabigaa maadaama aad gacan ka geysanaysid siday tafiirta dadku kusii socon lahayd.
Inaad ku doontid raallinimada Rasuulka (Sallallaahu calayhi wasallam) kol haddaad ku kaalmeyneysid siduu ummadaha kale tirada ummaddiisa ugu faani lahaa S.C.W
In Eebbe ku siiyo ubad khayr qaba oo kuu soo duceeya kolka aad dhimatid ee godka lagu geeyo
Inaad ku doontid shafeeco kolka ilmo yari kuu saqiiro.
Waxaa la sheegay in raggii hore ee suusuubbanaa mid kamid ahi uu niman walaalihii ah ooy jihaad ku wada jireen weydiiyey: (Ma garanaysaan shaqada aynu hadda hayno mid inooga ajar badan?). Markaas bay yiraahdeen: (Ma garanayno). Suu yiri: (Anaa garanaya).
Markey weydiiyeenna waxa uu ugu jawaabay: